Rep Power 8 ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က သချာင်္ကို 4th year အထိယူခဲ့ရပြီး application နဲ့တွဲမသင်တော့ နားလည်ဘို့အလွန်ကိုခက်ခဲခဲ့တာ။ ဒီ calculus စာအုပ်ကတော့ တကယ့်လောကပြဿနာတွေကိုအစပျိုးပြီးတာ့ integral/differential တွေဘာလို့လိုအပ်တာလဲ ဆိုတာမျိုးကစကိုင်တယ်။ ပြီးမှ တခုချင်းရှင်းသွားတာမျိုး။ မြန်မာပြည်မှာ ဒါမျိုးစာအုပ်တွေလိုတာဗျ။ သချာင်္သမားတွေကတော့ စာအုပ်နာမယ်မြင်ရုံ နဲ့ calculus မှန်းသိကြမှာပါ။ Newton ရဲ့ quote ကိုယူပြီး title ပေးထားတာဆိုတော့။
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to neonlm For This Useful Post:
Ko-Naing, tharrgyi, William Paul 06-18-2013 10:16 AM
Rep Power0အားလုံးအိုကေပါတယ်.. sign up လုပ်ပြီး စက္ကန့်၂၀စောင့်ပြီးရင်ရပါပြီ.. ကွန်ပျူတာမှာ iLivid ကိုဒေါင်း.. အင်စတောလုပ်.. ကော်ပီကူးထားသော လင့်ကို အင်စတောလုပ်ထားသော ဆော့ဝဲလ်(iLivid ) မှာ past လုပ် ဒါဆိုရင် connectionဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်. နောက် တော့ စကန့် ၂၀စောင့်ပါ(for only free account member)ပြိးရင်သူ့ဘာသာသူဒေါင်းပါတယ်.. စာအုပ်များကိုတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျနော်သင်ချာကို တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ.. အထူးသဖြင့် calculus ပါပဲ.. ကျေးဇူးပါ.. ဒေါင်းပြီးပြီဗျ.. ဒါပေမယ့် ဖိုင်တွေက pdf ဖိုင်နဲ့မပြပဲ.. html နဲ့ browser ကနေပွင့်နေတယ်.. ပြိးတော့ စာတွေက ဖတ်မရဘူး.. ကူပါဦးဗျာ....
Reply With Quote The Following User Says Thank You to komin2009 For This Useful Post:
William Paul 10-04-2014 11:58 AM
Rep Power0Great books!!!
Guitar E-books By TheSun in forum အခြား စာအုပ်များ